AMPASINDAVA-TSARATANANA : Tsy monina an-tanàna intsony ny mponina noho ny asan-dahalo
Vao mainka mivaivay tanteraka ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin’ny Distrikan’i Tsaratanàna iny. Hatramin’izay no efa voasokajy ho isany faritra mena ity farany saingy hatramin’izao mihamirehitra hatrany habibiana ataon’ireo olon-dratsy. 12 octobre 2017
Anisany tena velon-taraina amin’izany ireo mponina ao anatin’ny Kaominina Ampasindava izay mandrafitra ny Distrikan’i Tsaratanàna. Mandry tsy lavo loha ny vahoaka, ireto farany dia efa tsy mandry an-tanàna intsony fa efa mandositra any an-tsaha vokatry ny fampihorohoroana ataon’ireo malaso. Araka ny loharanom-baovao, farafahakeliny in’efatra ao anatin’ny herinandro no misy fanafihan-dahalo mitranga ao anatin’ity tanàna ity.
“Foana ny tanàna, mitsoa-ponenana ny ankamaroan’ny mponina noho ny asan-dahalo”, hoy ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana. Vao tamin’ny alatsinainy lasa teo no fantatra fa notafihana andian-dahalo am-polony maro ny tanàna izay nahaverezana omby an-jatony.
Nambaran’ireo mponina fa tsy vitan’ny mandrava fananana fotsiny ihany ireo dahalo fa mahavita mamono amin’ny fomba feno habibiana sy mandoro tanàna ihany koa. Velon-taraina ireo mponina vokatr’izany, izay anaovan’izy ireo antso avo amin’ny fitondrana mahefa mba hijery akaiky satria mihatra aman’aina mihitsy ny asa ratsy ataon’ireo dahalo.